कसरी एक डरलाग्दो चलचित्रले वास्तविक-जीवन मर्डर समाधान गर्न मद्दत पुर्‍यायो - iHorror
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	कसरी एक डरलाग्दो चलचित्रले वास्तविक जीवन हत्यालाई समाधान गर्न मद्दत गर्‍यो
कसरी एक डरलाग्दो चलचित्रले वास्तविक जीवन हत्यालाई समाधान गर्न मद्दत गर्‍यो
by तिमोथी Rawles अप्रिल 15, 2022
by तिमोथी Rawles अप्रिल 15, 2022 7,878 हेराइहरू
सन् १९८५ मा एउटा हत्याको घटनाले सानो सहर नियान्टिक कनेक्टिकटलाई हल्लायो। श्रीमान् डुङ्गा घुम्न गएको बेला एक गर्भवती श्रीमती सुत्ने कोठामा घाँटी थिचेर फेला परेकी छन् । एक साक्षीले अन्वेषकहरूलाई सुराग दिन नआएसम्म अपराध समाधान हुन सकेन, सबै ठाउँहरूमा, डरलाग्दो चलचित्रको VHS प्रतिलिपि।
एड र एलेन शर्मन शहर वरिपरि एक खुशी जोडी जस्तो देखिन्थ्यो, दुबै पेशेवर, एलेन एक प्रकाशक, स्थानीय सामुदायिक कलेजमा एड एक शिक्षक। यद्यपि तिनीहरू सामुदायिक अनुग्रहको प्रतीक जस्तो देखिन्छन्, तिनीहरूको निजी जीवनले फरक कथा सुनायो। एड एक फिलान्डर थिए जसले प्रायः पत्नी स्वैपिङ र सेक्स पार्टीहरूमा भाग लिन्थे। एलेन मन पर्दैन र प्रायः आफैं गतिविधिहरूमा संलग्न भइन्।
नैन्सी प्रेसकोट, एड की स्वामिनी दर्ज गर्नुहोस् जो गर्भवती भइन् र उनीहरूको चक्करको बखत एक बच्चा भयो। एलेनले उनको सीमामा एन्डीलाई न्यान्सी छाड्न भने ताकि उनीहरू फेरि नयाँ हुन सकून्।
एड सहमत भए र दम्पतीले आफ्नो विवाहलाई पुनःस्थापित गर्न खोजे, एलेन आफै गर्भवती भइन्।
तर अगस्त १ 1985 XNUMX को आइतवार, जब एड चारजना साथीहरूसँग डुiling्गा यात्रामा गएका थिए, उनले डु pregnant्गाको रेडियोमा उनलाई पुलिस बोलाए र आफ्नी गर्भवती श्रीमतीको मृत्यु भएको कुरा बताए। उनलाई एक पुरुष परिवारको साथीले पत्ता लगाए जसले एडलाई त्यस रात उनलाई हेर्न लगाएको थियो।
पहिलो नजरमा यो वास्तवमा यस्तो देखिन्थ्यो कि यदि एक घुसपैठिएर उनीहरूको घरमा आएका थिए र एलेनको जीवनलाई निचोडेर पछाडि छिट्टै हतार गरे, वास्तवमा, एयर कन्डिशनर अझै चालू भएको थियो।
एलेनको घाँटी वरिपरि रहेका लिगचरहरूले चिकित्सा परीक्षकलाई उनको आफ्नै अंडरवियरसँगै गला दबाइएको भनेर निर्धारण गर्न पर्याप्त प्रमाण प्रदान गर्‍यो। तर त्यसपछिको छानबिनले उनलाई पनि गला दबाइएको भनेर देखाउँदछ पहिले जाँघिया उनको घाँटी वरिपरि गएको थियो चिकित्सा परीक्षकहरूले निर्धारित गरे कि उनलाई त्यो आइतवार अघि मारिएको थियो।
प्रश्न रह्यो; यो काम कसले गर्ने थियो? र सामान्यतया केसको रूपमा अनुसन्धानकर्ताहरूले जीवनसाथीलाई श a्काको रूपमा हेर्छन। तर एड आइतवारको नौका यात्रामा गएको थियो, उनीसँग ठोस अलिबी थियो, चार जना साक्षी थिए। उसले यो गर्न सक्दैनथ्यो। कसरी उहाँ एकैचोटि दुई ठाउँमा हुन सक्नुहुन्छ?
एडले आफ्नी श्रीमतीसँग एक मित्रको घरमा हत्या भएको रात पनि कुरा गरेका थिए, सबैले उनको फोनमा सुने।
फोरेन्सिक वैज्ञानिकहरू विशेष गरी कनेक्टिकट राज्य अपराध प्रयोगशालाका डा। हेनरी लीलाई चकित पारे। त्यो तबसम्म हो जब कसैले टिप्स लिएर अगाडि आउँदछ जसले केसको ढक्कन फुल्छ।
साक्षीले भने कि उनी आफ्नो यात्रा यात्राको बिहान स्थानीय भिडियो स्टोरमा एडमा भागिन्। उनी भन्छिन कि एडले डराउने चलचित्र सिफारिश गर्‍यो अँध्यारो, एलेन डेभलिन नामको एक विकृत व्यक्तिको बारेमा रहस्य, जसले प्रारम्भिक रूपमा आफ्नी पत्नी र बच्चाहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारेको हुन सक्छ र त्यसपछि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विफल पार्न अपराध दृश्यलाई हेरफेर गरेको हुन सक्छ।
फिल्ममा, रिचर्ड विडमार्क, जासूस जो स्टेनर, लज्जित छ र एलेन, वास्तवमा क्रूर हत्याको लागि जिम्मेवार छ भनेर प्रमाणित गर्न सेट गरेको छ।
ब्ल्याकआउट (१ 1985 XNUMX) IMDb मार्फत
एयर कन्डिशनर याद छ? "ब्ल्याकआउट" मा हत्याराले अन्वेषकहरूलाई फ्याँक्न चलाखी चाल प्रयोग गर्दछ। उसले उपकरणलाई यसको उच्चतम सेटिंग्समा बदल्छ र यसलाई चालु राख्दछ।
अत्यन्त चिसो तापक्रमले कठोर मोर्टिस प्रक्रिया र शरीरको विघटनलाई धीमा गर्दछ जसले अन्वेषकहरूलाई मृत्युको वास्तविक समयको गलत अनुमान गर्न सक्दछ।
फिल्ममा Widmark र Sherman मामिलामा वास्तविक जीवन अन्वेषकहरूले यो हत्यारा ह्याक पत्ता लगाउँछन्। शर्मन केसमा जहाँ कोरोनरले मृत्युको समय आइतवार निर्धारण गर्यो, तिनीहरूले अनुमान गरे कि एयर कन्डिसनर चलिरहेको छ, मृत्युको समय वास्तवमा दुई दिन अघि शुक्रबार थियो। यसको मतलब एडले यो गर्न सक्थे पहिले आफ्नो माछा मार्ने यात्रा को लागी छोड्दै।
अझै, एडले हत्याको रात टाढाबाट आफ्नी श्रीमतीलाई बोलाएका थिए र उनका साथीहरूले त्यो प्रमाणित गर्न सक्थे। एडलाई अपरिचित बाहेक, त्यहाँ फोनमा अरू कोही हुनुहुन्थ्यो, एक भद्र पुरुषकी छोरीले खबर गरिन् कि उनले फोन गर्न रिसीभरलाई लिइन् र कुरा गरिरहेको सुन्नुभयो, केवल ऊ आफ्नी श्रीमतीसँग कुरा गरिरहेको थिएन, ऊ कुरा गरिरहेको थियो अर्को छेउमा बजिरहेको: कल एक नक्कली थियो।
शो फोरेंसिक फाईलहरूको अनुसार (तल पूर्ण एपिसोड), शुक्रबार खाना खाएपछि एडले आफ्नी श्रीमतीको ना bare्गो हातले गोली हानी हत्या गरे। उनले त्यसपछि उनको घाँटी वरिपरि अंडरवियर बेर्ने प्रयास गरे र अन्वेषकहरूलाई यो यौन अपराध हो भन्ने सोच्न भ्रममा पारे।
त्यस पछि, र फिल्मबाट प्रेरित अँध्यारो, त्यसपछि उसले विघटन प्रक्रियालाई ढिलो गर्न एयर कन्डिसनरलाई उच्चमा बदल्यो अन्ततः कोरोनर र मृत्युको वास्तविक समयलाई गलत दिशामा लैजान्छ। त्यसपछि उसले माछा मार्ने यात्राको लागि आफ्नो साथीको घर छोड्यो र त्यो रात पछि उसको साथीहरूको कानमा कललाई ठट्टा गरे, तर अरू कसैले सुनिरहेको थिएन।
अन्ततः फिल्म को लागी धन्यवाद अँध्यारो, अन्वेषकहरूले निष्कर्ष निकाले कि फ्रिगिड तापमानको साथ, मृत्युको वास्तविक समय आइतवार थिएन, दुई दिन पहिले जब एड अझै घरमा थिए।
एड शर्मनलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। अभियोजकहरूले तर्क गरे कि एलेनले आफ्नो विवाह त्यागेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्थे। उनी, व्यवसायको प्राथमिक मालिक हुन एडीलाई बताउँछिन् कि उनले आफ्नो प्रेमिका र सेलबोट पाउन सक्छन् र अरू केहि पनि छैन।
मुद्दाको दौडान, जेलरहरू एलेनको मृत्युको समयको बारेमा बढी जान्न उत्सुक थिए। फरेन्सिक प्रमाणको आधारमा उनीहरूले यो निर्णय गरे कि एडसँग हत्या गर्ने समय र अभिप्राय थियो, र अपराध भएको छ वर्ष पछि उनी प्रथम श्रेणीमा हत्याको अभियोगमा दोषी पाए र 50० वर्ष जेल सजाय पाए।
एडले कहिल्यै दोषी महसुस गरेनन् र उनी जेलमा मृत्यु भएको तीन वर्ष पछि हार्ट अट्याकको सिकार भए।